Weird – Myanmar
ကလေးအသားရေဟာ အလွန်နူးညံ့ပြီး ထိခိုက်လွယ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့လက်သည်းတွေကြောင့် အလွယ်တကူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိဘတွေက ကလေးတွေမတော်တဆ သူတို့လက်သည်းနဲ့ မျက်လုံးနဲ့အခြား အစိတ်ပိုင်းတွေကို မကုတ်ခြစ်မိလေအောင် လက်အိတ်လေးတွေ စွပ်ပေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခု လက်သည်းရှည်တွေနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပုံကိုမြင်လိုက်ရတော့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေအားလုံး အံ့သြသင့်ခဲ့ရတယ်။ ထိုပုံကို အင်စတာဂရမ်အကောင့် Daily_earthpix မှာ ”Cute or […]
အမြွှာတွေများစွာနဲ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမြွှာမင်္ဂလာဆောင်
ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာတော့ အမြွှာသတို့သားနဲ့ အမြွှာသတို့သမီး စုံတွဲနှစ်တွဲ၊ ကောင်းချီးပေးဖို့အတွက် အမြွှာဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ယောက်၊ အမြွှာကလေးငယ်စုံတွဲနှစ်တွဲတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့ အရာအားလုံးကို နှစ်ခုစီမြင်နေကသလိုဖြစ်မှာပါ။ ရိုးရှင်းပေမယ့် အမြွှာတွေနဲ့သာကျင်းပတဲ့ အဆိုပါမင်္ဂလာပွဲဟာ အများနဲ့မတူထူးခြားပြီး မမေ့နိုင်အောင်ဖြစ်နေမှာပါ။ Dinker နဲ့ Dilraj Varikkassery အမည်ရ အမြွှာညီအစ်ကိုတွေဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးအရမ်းချစ်ကြတာဖြစ်ပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းကနေ အလုပ်ဝင်တာတောင် […]
သင်္ဘောတွေဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်က လေထဲမှာရောက်နေလေ့ရှိတာကို တချို့တလေတော့ မြင်ဖူးကောင်းမြင်ဖူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်း ရေပြင်အထက်လေပေါ်ပျံနေတဲ့ သင်္ဘောပုံတွေကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ တခါတရံ သင်္ဘောတွေတင်မကပဲ ကျွန်းတွေကိုပါ လေပေါ်မှာ သွားမြင်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အံသြဖွယ်ဖြစ်ပြီး တချို့ဆို တစ္ဆေသင်္ဘောလို့တောင် နာမည်တပ်ကြပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာ အမြင်လွဲမှားမှုဖြစ်စဉ် တမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံနယ်ပယ်မှာတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို […]
ပရလောကဆိုတာကို သင်ယုံပါသလား။ သရဲရှိတယ်ဆိုတာကို သင်ယုံပါသလား။ လက်တွေ့ခေါ်ယူသက်သေမပြနိုင်ပေမယ့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာတော့ အံဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေတာကို သင်လက်ခံရမှာပါ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊Aberdeenshire မှာရှိတဲ့ Crathes ရဲတိုက်ဟာ သရဲလိုလို၊ ၀ိညာဉ်လိုလိုအရာတွေ ခဏခဏမြင်တွေ့ရတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၇၈နှစ်အရွယ်ရှိ Bill Andrew ဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ အတူ ထိုရဲတိုက်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး […]
ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဟာ ပါလီမန်ထဲမှာ သူရဲ့ဖုန်းနဲ့ လူပျိုကြိုက်ပုံတွေ ထိုင်ကြည့်နေတဲ့အတွက် ဝေဖန်ခံနေရကြောင်း သိရပါတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်နာမည်ကတော့ Ronnathep Anuwat ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဖုန်းထဲက လူပျိုကြိုက်ပုံတွေကို အချိန်(၁၀)မိနစ်ကြာ အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်ရှုနေခဲ့တာပါ။ Ronnathep ဟာ ရုပ်ထွက်ကို ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်စေဖို့ သူမျက်နှာ Mask ကိုတောင် […]
တရုတ်နိုင်ငံ Jinan မြို့မှာရှိတဲ့ Hotpot ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဟာ စကတ်မလုံတလုံတွေဝတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက် အစားအသောက်ဖိုး discount ပေးဖို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် ။ မိန်းကလေး Customer များအနေဖြင့် ဒူးခေါင်းအထက်ကနေတိုင်းတာရင် စကတ်၏အနားစနှင့် 12လက်မ အကွာအဝေးရှိပါက အစားအသောက်ဖိုး 90% discount ရရှိမှာပါ ။ သို့ပေမဲ့ ဒူးခေါင်အထက် […]
Tik Tok ပေါ်ရောက်လာတဲ့ အိမ်အိုကြီးထဲက တစ်စုံတစ်ယောက် (ရုပ်သံ)
Tik Tok ပေါ်ရောက်လာတဲ့ အိမ်အိုကြီးထဲက တစ်စုံတစ်ယောက် (ရုပ်သံ) လက်တလော Tik Tok မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကျောချမ်းဖွယ်ရာ ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် ။ ဒီဗီဒီယိုကို ရေဗက္ကာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုသူဦးရေ ၁.၈ သန်းထိတောင် ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ ဒီဗီဒီယိုက သူမကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးခဲ့တာတော့ […]
တရုတ်နိုင်ငံက မိဘနှစ်ဦးဟာ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ (၂)နှစ်အရွယ်သားကို ဆက်လက်မစောင့်ရှောက်ချင်တော့တဲ့အတွက် သမီးကြီးကို တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ သူတို့မိဘနှစ်ယောက်စလုံးဟာ ဆင်းရဲပင်ပန်းနေပြီဖြစ်လို့ မောင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ သမီးကြီးရဲ့ဝတ္တရား ဖြစ်သွားပြီလို့ ယင်းမိဘနှစ်ဦးက ဆိုခဲ့တာပါ။ သမီးကြီးက လက်မခံလို့ တရားရုံး ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တရားရုံးကလည်း မိဘတွေကို အနိုင်ဒီဂရီ ပေးခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေဟာ ကလေးနှစ်ယောက်ကို […]
နှလုံးရောဂါ ရှိသူများ မဆော့သင့်တဲ့ Talking Angela 3AM Challenge (ရုပ်သံ)
အခုတစ်လော YouTube Facebook တို့မှာ Hit ဖြစ်နေတဲ့ Talking Angela လာအကြောင်းလေးရှင်းပြပေးပါမယ်။ Talking Angela ဆိုတဲ့ application လေး‌က ကလေးအများစုဆော့တဲ့ ကြောင်လေးနဲ့ စကားပြောတဲ့ Gameလို့ အများစုက သိကျတာပါ။ ဒါပေမယ့် Talking Angela App မှာက […]
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံက မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ ခန္တာကိုယ်ဖွံဖြိုးပုံ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါဆန်းတစ်မျိုးကြောင့် သူမရဲ. ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနီးပါးကို ပလက်စတစ်ပုံးထဲမှာသာ နေထိုင်ပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ သူမဟာ မွေးဖွားကာစက အခြားသော ကလေးငယ်တွေလိုပဲ ကျန်းကျန်းမာမာ ဖြစ်ပေမယ့် ခြောက်လအရွယ်မှာ လက်ရှိသူမခံစားနေရတဲ့ ရောဂါစတင်ဖြစ်လာပါတယ် ။ သူမရဲ. ခန္တာကိုယ်အောက်ပိုင်းနဲ့ လက်တွေဟာ လက်ဆက်ဖွံဖြိုးခြင်း မရှိတော့ပဲ […]